Home Wararka Gudoomiyaha Gobolka Nairobi, Mike Sonko oo xabsiga loo taxaabay
Gudoomiyaha Gobolka Nairobi, Mike Sonko oo xabsiga loo taxaabay
Waxaa maanta Xabsiga loo taxaabay guddoomiyaha Gobolka Nairobi Mike Sonko kaasi oo loo haysto inuu lunsaday lacag Malaayiin ah. Guddoomiyaha oo ah nin caan ka ah dalka Kenya ayaa Booliisku ka soo qabteen magaaladda Voi, isagoo markaasi ku sii jeeday Magaaladda dekeda ee Mombasa, Booliisku waxay sheegeen inuu doonayay inuu baxsado.
Gudoomiyaha ayaa waxaa loo haystaa dacwad la xiriirta lunsashada lacag lagu sheegay KSh357 Milyuun oo loogu talagalay Degaanka Nairobi. Dacwad oogaha Guud ee Kenya Nuuradiin Xaaji ayaa sheegay in hayo cadaymo ku filan oo maxkamadu lagu keeni doono Guddoomiyaha.
Dowlada Kenya ayaa waayahan danbe waday olole lagu ciribtiraayo musuqmaasuqa. Hay’adda ka hortega musuqmaasuqa ayaa xaqiijisay in Xabsiga la dhigay guddoomiyaha iyagoo sheegay inuu doonayay inuu ka baxsado Cadaaladda sida ay ku sheegeen qoraal ay soo dhigeen bartooda twitterka.
Sida ay sheegeen ciidamada Booliska, Dacwad oogaha Guud wuxu kaloo amar ku bixiyay in la soo xiro saraakiil sare sare oo ka tirsan Koontiga Nairobi, kuwasoo loo haysto inay musuqmaasuqeen hantidii ummadda ee loo dhiibay.